Ndị ọka iwu International bankruptcy na Netherlands - Law & More
Onye ọka iwu enweghị ego na Netherlands
Developjọ mmepe ego na ọnọdụ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ anaghị enwe ike ịkwụ ndị ha ji ụgwọ ụgwọ ọrụ, nwere ike ime ka ụlọ ọrụ daa akụ. Bankkpata enweghị ego bụ ihe ọhụụ nye onye ọ bụla metụtara. Mgbe ụlọ ọrụ gị nwere nsogbu gbasara ego, ọ dị ezigbo mkpa ịkpọtụrụ onye ọka iwu ezighi ezi. Ma o metụtara arịrịọ mkpocha akụ ma ọ bụ ịgbachitere nkwupụta nke enweghị ego, ọka iwu anyị nwere ike inye gị ndụmọdụ maka ụzọ kacha mma na ụzọ ọ bụla. Law & More na-enyere ndị isi, ndị ahịa aka, ndị ọrụ na ndị ji ụgwọ ndị ọzọ e tinyere akwụkwọ maka odida. Ndị otu anyị na-agba mbọ ịme ihe iji belata nsonaazụ nke enweghị ego.
OUchọrọ ka ịnakwere nkwado iwu?
Kpọtụrụ onye na-ekwu okwu LAW & MORE
Developjọ mmepe ego na ọnọdụ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ anaghị enwe ike ịkwụ ndị ha ji ụgwọ ụgwọ ọrụ, nwere ike ime ka ụlọ ọrụ daa akụ. Bankkpata enweghị ego bụ ihe ọhụụ nye onye ọ bụla metụtara. Mgbe ụlọ ọrụ gị nwere nsogbu gbasara ego, ọ dị ezigbo mkpa ịkpọtụrụ onye ọka iwu ezighi ezi. Ma o metụtara arịrịọ mkpocha akụ ma ọ bụ ịgbachitere nkwupụta nke enweghị ego, ọka iwu anyị nwere ike inye gị ndụmọdụ maka ụzọ kacha mma na ụzọ ọ bụla.
Law & More na-enyere ndị isi, ndị ahịa aka, ndị ọrụ na ndị ji ụgwọ ndị ọzọ e tinyere akwụkwọ maka odida. Ndị otu anyị na-agba mbọ ịme ihe iji belata nsonaazụ nke enweghị ego. Anyị nwere ike nye ndụmọdụ ka gị na ndị na-binyere ego kwabata, mee ka ịmaliteghachi ma ọ bụ nyere aka n'okwu ikpe. Law & More na-enye ọrụ ndị a gbasara mmefu ego:
• inye ndụmọdụ n'ihe metụtara odida ma ọ bụ mbupu ego;
• ịhazi ndị kwụrụ ụgwọ nhazi;
• na-enye ndụmọdụ maka ibu ọrụ nke ndị isi, ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọzọ nwere mmasị;
• ịmere usoro ikpe;
• ede akwụkwọ maka odida nke ndị ji ụgwọ.
Ọ bụrụ n ’ịnwere ụgwọ, anyị nwere ike ịnyere gị aka na ịmejuputa ikike ngọngọ, ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ setịpụ ikike ịnwere. Anyị nwekwara ike inyere gị aka ịmanye ikike nchekwa gị, dị ka ikike nke nkwa na nnyefe, ikike njigide aha, nkwa nke ụlọ akụ, itinye ego nchekwa ma ọ bụ omume n'ihi njikọta na ụgwọ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ji ụgwọ, anyị nwere ike ịnyere gị aka ịza ajụjụ ndị metụtara ikike nche dị n’elu na ihe ọghọm metụtara. Anyị nwekwara ike inye gị ndụmọdụ n ’etu onye mgbazinye nwere ikike ịme ụfọdụ ikike ma nyere gị aka mgbe a ga-egbu ndị na-ezighi ezi ndị a.
Dabere na Iwu ruptlọ Ego Ego, onye ji ụgwọ na-atụ anya na ọ gaghị enwe ike ịkwụ ụgwọ ndị pụrụ iche nwere ike itinye akwụkwọ maka mbubata. Nke a pụtara na enyere onye ji ụgwọ ụgwọ ka ọ gbue oge ịkwụ ụgwọ. Enwere ike ịnye ndị ọrụ iwu yana ndị eke onwe ha na-arụ ọrụ ma ọ bụ azụmaahịa onwe ha Ọzọkwa, enwere ike itinye ya naanị site na onye ji ya ụgwọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ n'onwe ya. Ebumnuche nke oge a bụ iji zere itinye ego na ikwe ka ụlọ ọrụ ahụ dịrị. Ntuziaka na-enye onye ji ya ụgwọ ụgwọ oge na ohere iji wee zụọ ahịa ya. Na omume, nhọrọ a na - edugakarị na nhazi ịkwụ ụgwọ na ndị ji ụgwọ. Ntughari nwere ike nye uzo ozo ma oburu na odida. Agbanyeghị, ndị ji ụgwọ anaghị eme nke ọma n’ichekwa azụmaahịa ha. A na-ewere oge oge ịkwụ ụgwọ dịka ihe na-ebute mbata ego.
Dabere na Iwu ruptlọ Ego, onye ji ụgwọ, onye nọ n'ọnọdụ ọ na-akwụghị ụgwọ, a ga-ekwupụta na ọ ga-akwụ ụgwọ site n'usoro ụlọ ikpe. Ebumnuche nke ịgbazite ego bụ iketa akụ nke onye ji ụgwọ n'etiti ndị binyere ego. Onye ji ya ụgwọ nwere ike ịbụ mmadụ nwe onwe ya, dịka onye sitere n'okike, azụmahịa otu mmadụ ma ọ bụ mmekọrịta ọhaneze, kamakwa ụlọ ọrụ iwu kwadoro, dịka BV ma ọ bụ NV A ga-ekwupụta na onye ji ụgwọ ma ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala ndị e ji ụgwọ. .
Ọzọkwa, opekata mpe otu ụgwọ ịkwụghị ụgwọ, ebe ọ kwesiri ịdị. N'okwu ahụ, enwere ụgwọ ịgba ụgwọ. Enwere ike itinye akwụkwọ mkpesa maka mmefu ego na nkwupụta nke onye na-arịọ arịrịọ na arịrịọ nke otu ma ọ bụ karịa nke ndị na-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na enwere ihe ndị metụtara metụtara ọhaneze, thelọ Ọha na-ahụ maka mgbasa ozi nwekwara ike ịgba akwụkwọ maka odida.
Mgbe nkwuputa nkwuputa ego kwuru, ndị otu ahụ na - efufu mkpofu ya na njikwa akụ ya. Ndị otu ejighi ego ga-enwe ike igosipụta mmetụta ọ bụla na akụ ndị a. A ga-ahọpụta onye nrụzi; nke a bụ ụlọ ọrụ ọka ikpe a ga-ebo ebubo na njikwa na mmiri nke ihe ndị dị n'ime ụlọ. Onye n’ebube okwu ahụ ga-ekpebi ihe a ga-eme na akụ nke ndị bịara akụ. O kwere omume na onye ntinye aka ga-esoro ndị binyere aka na nhazi. N'ebe a, enwere ike ikwenye na ma ọ dịkarịa ala akụkụ nke ụgwọ ha ga-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na enweghị ike iru nkwekọrịta dị otú a, onye na-emebe ya ga-aga n'ihu iji mefu ego ahụ. A ga-erere ala ahụ ma nweta ihe ndị zụrụ azụ ga-ekerịta ndị kwụrụ ụgwọ. Edozi nsogbu, a ga-etisasị ụlọ ọrụ iwu kwurupụta na ọ gaghị akwụ ụgwọ.
Have ga - emegide iwu enweghị oke ma ị ga - achọ inweta nkwado iwu? Biko kpọtụrụ Law & More.